Oi! ပျံနှံနေသော original Oi! ရွေ့လျားမှုများသည် ကြမ်းတမ်းသော အလုပ်သမားတော်လှန်ရေး အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာသားများထဲတွင် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း၊ အလုပ်သမား မှန်ကန်ရေး၊ ရဲများ၏နှောင့်ယှက်မှုများနှင့် အခြား အာဏာပိုင်များ အစိုးရ၏ဖိနှိပ်မှုများအကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားသည်။ Oi!သီချင်းများသည် လမ်းတွင် အကြမ်းဖက်မှုများ၊ဘောလုံး၊ လိင်နှင့် အရက်များပါဝင်သည်။
လူမှုကွန်ရက် (ရုပ်ရှင်) ယင်းဇာတ်ကားသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ၆၈ ကြိမ်မြောက် ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဒရာမာအမျိုးအစား အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု (Best Motion Picture – Drama) အပါအဝင် အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု၊ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ညွှန်းဆုနှင့် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဝင်တေးသွားဆု (Best Original Score) ကို ရရှိခဲ့ရာ ဆုအများဆုံး ရရှိသည့် ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။
Post-grunge Original grunge တီးဝိုင်းများ၏ fan များသည် အထူးသဖြင့် အမျိုးအစား၏ဖန်တီးမှု စွမ်းရည်ရှိသော သီးသန့် အရည်အသွေး ကန့်သတ်ချက်နှင့် watered-down approach ကို မကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။ Post-grunge သည် အမြတ်အစွန်း ထွက်သော musical style: post-grunge သည် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် ထောက်ခံမှုရရှိရန် ကြိုးပမ်းသည့် အစီအစဉ်ဖြင့် တည်ရှိသည်။ ဆက်လက်ပေါ်ထွက်လာသော post-grunge ဓလေ့အရ များပြားစွာသော အုပ်စု ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိက၏ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိသော Finding Beauty inf Negative Space ဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့စဉ်တွင် Shinedown သည် သူတို့၏၂၀၀၈ album "The Sound of Madness" သည် mainstream သို့ တွန်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။
အန်တိုနော့ဗ် အေအန်-၂၂၅ The company initiated operations withafleet of four An-124-100s and three Antonov An-12s, but by the late 1990saneed for aircraft larger than the An-124 became apparent. In response, the original An-225 was re-engined, modified for heavy cargo transport, and placed back in service under the management of Antonov Airlines.
Post-grunge Post-grunge ပထမမျိုးဆက်သစ်အုပ်စုများကို ဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် Creed နှင့် Nickelback တို့သည် သမာရိုးကျကို ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဤသဘောသည် original grunge တီးသိုင်းတို့၏ လောကကို စိတ်ပျက်မှုကို လုံးဝဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Creed နှင့် Nickelack ဦးဆောင်သောအားဖြင့် အခြား post-grunge တီးဝိုင်းများ ၂၁ရာစုအစတွင် ပို၍ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။3Door Down သည် chart များ ရက်သတ္တပတ်အတော်အကြာလွှမ်း မိုးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင် Paddle Mudd ကဲသို့များ hit=single များအတွက် ပုံသေနည်းများ ထုတ်ခဲ့သည်။
Bluegrass Monroe၏ တီးဝိုင်းတွင် Earl Scruggs (ဘင်ဂျို) အဆိုတော်နှင့် ဂီတာသမား Lester Flatt၊ Chubby Wise (တယော)နှင့် Howard Wattas (ဘေ့စ်ဂီတာသမား) တို့ပါဝင်ပြီး "the original bluegrass တီးဝိုင်း" ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အသံနှင့် တူရိယာတည်ဆောက်ပုံသည် ယနေ့ခေတ်တိုင်ကျန်ရစ်သည်။ ၁၉၄၈တွင် the Stanley Brothers သည် ရိုးရာသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော Molly and Tenbrooks ကို blue Grass Boys' ပုံစံဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
ဗော့စတော့ ၁ အာကာသယာဉ်သည် ကမ္ဘာကိုတစ်ကြိမ်တည်းသာပတ်ခဲ့သည်။ (to this date the shortest orbital manned spaceflight). တရားဝင်မှတ်တမ်းများအရ ယာဉ်စတင်ပစ်လွှတ်ချိန်မှပြန်လည်ဆင်းသက်ချိန်အထိ စုစုပေါင်း ၁၀၈ မိနစ်ကြာခဲ့သည်။ ဂါဂါရင်သည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း အမြင့် ၇ ကီလိုမီတာ(၂၃,၀၀၀ ပေ)ခန့်တွင် လေထီးဖြင့်ခုန်ထွက်ပြီး အာကာသယာဉ်မှသီးခြားဆင်းသက်ခဲ့သည်။ Due to the secrecy surrounding the Soviet space program at the time, many details of the spaceflight only came to light years later, and several details in the original press releases turned out to be false.
ပီအယ်လ်စီ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ General Motors Corporation က အင်ဂျင်နီယာများသည် Auto System မှာ Relay များစွာကိုသာ အသုံးပြု ထားရသဖြင့် ကားမော်ဒယ်တစ်ခုပြောင်းတိုင်း Relay Logic အသစ် ပြန်တည်ဆောက်ရသဖြင့် ၎င်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် Bedford Associates မှ PLC ကိုဝယ်လိုကြသည်။ ပထမအသုတ်အနေဖြင့် ဒေါ်လာ ၁ သန်းဖိုးတွင် ပထမဆုံး PLC ဖြစ်တဲ့ Modicon 084 ကို ၁၉၆၉ နိုဝင်ဘာလတွင် General Motors မှ စတင်လက်ခံအသုံးပြု ခဲ့သည်။ သုံးရ အဆင်ပြေသဖြင့် နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၁ သန်းဖိုးဝယ်ကာ PLC မူပိုင်ခွင့် OEM ( Original Equipement Manufacturer ) ကိုလည်း General Motors ကရယူသွားသည်။